IKALA STEM Manampy ny vehivavy ho tia ny taranja siantifika
Nanisana Nosamborina ireo mpampiady akoho
Nampody olona tany amin’iny Nanisana iny ny polisy no sendra ireo olona mitangorongorona mijery adin'akoho.
Tsy voahaja ny fepetra ara-pahasalamana Nahavory olona 3000 ny Fitampoha-Fanompoambe 2020…
Nankatoavina ny fanatanterahana ny hetsika ara-kolontsaina sy fomban-drazana « Fitampoha-Fanompoambe 2020 » ny 6 jolay teo tao amin’ny Doany Miarinarivo,
Fomba fiasa Manana sata manokana ny fitsaboana nentim-paharazana
Efa misy naoty avoakan’ny minisitera tompon’andraikitra hatrany, hoy ry zareo eo anivon’ny ANTM,
Vakokoa sy harem-pirenena Maro no re hoe mihitsoka any Frantsa
Ny 14 septambra 2018 no nalaza ho nisy nahita tao Paris- Frantsa, ny satroboninahitry ny mpanjaka Ranavalona I izay very tao amin’ny
Fitampoha Hotanterahina ny 6 jolay 2020 izao
Kianja Masoandro « Tsy misy asa miato izany ! », hoy ny minisitra
Misaona ny tontolon’ny zava-kanto Nodimandry tampoka i Bakomanga
Vitsy ireo vehivavy liana amin’ny taranja siantifika eto amintsika. Amin’ny ankapobeny, lehilahy avokoa no tena mirona sy milona bebe kokoa ao anatin’izany, antony nanosika ny fikambanana Ikala Stem hanatanteraka atrikasa etsy amin’ny le pavé Antaninarenina nanomboka, omaly.
Fikambanana iray avy any Etazonia antsoina hoe : lemur love no mifanome tanana aminy amin’izany ao anatin’ilay lohahevitra hoe : “raiso an-tanana ny hoavinao”. Anisan’ny hohazavain’ny roa tonta ao ireo karazana asa azon’ny vehivavy misafidy ny taranja siantifika hatao aorian’ny fahavitan’ny fianarany. Eo ihany koa ireo karazana traikefa sy fahaiza-manao tokony hananan’izy ireny. Mpandray anjara manodidina ny 50 isa no hahazo tombony amin’izany. Araka ny fanazavan-dRtoa Seheno Andriantsarazala, sekretera jeneraly eo anivon’ny fikambanana Ikala Stem dia asa miompana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana no nozarain’izy ireo omaly izay mbola hitohy anio sy rahampitso.